🥇 ▷ Galaxy S11 mar dambe uma baahnaan doontid saxitaanka si loo garto aqoonsiga farta ✅
Galaxy S11 mar dambe uma baahnaan doontid saxitaanka si loo garto aqoonsiga farta
Qalabka ‘ultrasonic’ isku dhafan ee shaashadda loogu talagalay aqoonsiga faraha ayaa ah inuu laba jibaar ka weynaado midka Galaxy S10 e Galaxy Note 10. Oo dhanka sare waxaa sidoo kale jira kamarad walwalsan oo loogu tala galay 5x soo jiidashada indhaha ah!
Taxanaha Galaxy S10 wuxuu soo saaray, markii ugu horeysay Samsung taleefannada casriga ah, ee Sawir qaadaha sawirka faraha ayaa lagu dhajiyay muuqaalka. Shirkadda weyn ee Kuuriya, si kastaba ha noqotee, kuma koobnayn shaqada guriga oo keliya, laakiin waxay horumarisay tikniyoolajiyadeeda u gaarka ah, kuwaas oo adeegsata ultrasound aqoonsi dhakhso ah – iyo wixii ka sarreeya oo aamin ah – ee muuqaalka. Si kastaba ha noqotee, sidii aad ula qabsan laheyd inaad farahaaga geliso barta saxda ah Runtii maahan wax fudud, xitaa markay maqan tahay fasax in lagu hago faraha si indho la’aan ah. Laakiin mustaqbalka Galaxy S11 ayaa durbaba isku diyaarinaya looga gudbo dhibaatadan.
Marka loo eego waxyaabaha lama huraanka ah ee ay soo gudbiyeen asxaabta kooxda Galaxy Club dhab ahaantii, taxanaha soosocda ee telefishanka casriga ah ee Samsung waa inay qaataan aaladda ‘sensor ultrasonic’ ee lagu soo bandhigay bandhigga ee cabirrada 64 mm², ama ku dhawaad ​​labanlaab 34 34² ku faanaysan yahay qalabka dareeraha isku dhafan ee Galaxy S10 iyo Galaxy Note 10. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay lahaadaan aag aqoonsi oo sidaas darteed waxay yareyn doontaa halista meelaynta qaldan farta.
AKHRISO: Samsung Review Galaxy Note 10+
Dareenka cusub ayaa la soo saari doonaa iyadoo lala kaashanayo shirkadda Taiwanese GIS, kaas oo waliba u muuqda inuu ka shaqeynayo akhristaha kale ee ultrasonic, kuna qalabeysan a dusha sare ee 600 mm². Nasiib darrose, dareemahan wali diyaar uma ahan wax soo saar ballaaran, laakiin dhanka taleefanka casriga ah mustaqbalka dusha sare ee shaashadda ayaa soo ifbaxaya si ay u sameyso xasuus fog oo ah baahida loo qabo saxnaanta milimitir maanta.
Qoraalka kama dambaysta ah ee ku saabsan mid ka mid ah suurta gal kaamirooyinka taas oo mustaqbalka la aadi doono mustaqbalka Galaxy S11. Samsung runti waxay ku shaqeysaa faahfaahinta muraayadaha periscopic, awood u leh inaad mid ka dhigto kuwa isticmaala 5x soo jiidashada indhaha, ballaaritaan aad u fiican oo aan tayo lahayn. Waagii hore waxaa la isla dhex marayay in kamaradan laga yaabo in uu ka soo muuqdo Galaxy Note 10, si markaa loo xalliyo xaalad adag. Waqtiga ugu wanaagsan wuxuu ugu dambeyntii noqon karaa taxanaha Galaxy S11.